ट्राफिकको नयाँ जरिवाना लागू, जान्नुस् कुन कसुरमा कति ? | Hulaki Online
ट्राफिकको नयाँ जरिवाना लागू, जान्नुस् कुन कसुरमा कति ?
१ जेठ, काठमाडौं । ट्राफिक नियमलाई बेवास्ता गर्दै जथाभावी उल्लंघन गर्नुहुन्छ भने अाजदेखि सचेत हुनुहोला । सानो लापरवाही गर्दा दुर्घटनाको जोखिममा त पर्नु हुन्छ नै, ट्राफिक प्रहरीको फन्दामा पर्नुभयो भने ठूलो जरिवाना रकम पनि तुर्नपर्ने हुन्छ । आजदेखि ट्राफिक प्रहरीले लिने जरिवानामा भारी वृद्धि भएको छ ।